सेक्स – Lokpati.com
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड अपराध नेपाली काँग्रेस नेकपा पक्राउ राशिफल प्रचण्ड अमेरिका चितवन नेपाल प्रहरी केपी शर्मा ओली सरकार प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मृत्यु
लाेकपाटी न्यूज २१ भाद्र २०७६, शनिबार १८:५१ 0
सेक्स एक यस्तो विषय हो, जसमा सबैको चासो छ, तर मानिस यस विषयमा कुरा गर्न हिचकिचाउँछन्। पुरुषहरु सेक्सको बारेमा आफ्नो विचार खुलस्त रुपमा राख्न सक्छन। तर यदि महिलाहरू यस विषयमा खुलेर कुरा गर्न चाहन्छिन भने पनि उनीहरुलाई गलत दृष्टिले हेरिन्छ।…
सेक्सले बुढ्यौली रोक्दछ, छालाको सुन्दरता बढाउँछ
लाेकपाटी न्यूज २४ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०७:५९ 0
काठमाडौं। सधैं आकर्षक देखिने चाहना सबैलाई हुन्छ। तर कसरी ? बेलायतका शोधकर्ता डाक्टर डेभिड विक्सले मानिसमा छिटै आउने बुढोपनालाई कसरी रोक्न सकिन्छ र तन्नेरीपनालाई कसरी लामो समयसम्म कायम राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेका छन्। उनका…
बुढेसकालमा सेक्स : के–के हुन् समस्या, समाधान के ? (१२ टिप्स्)
लाेकपाटी न्यूज ११ जेष्ठ २०७६, शनिबार १८:२० 0
काठमाडौं। यौन र शारीरिक सम्बन्धसँग जोडिएका कयौं किस्साहरु वास्तवमा मिथ्यामा गएर टुङिगएका हुन्छन्। सेक्स विशेषज्ञ डाक्टर निक्की गोल्डस्टीनले सेक्ससँग जोडिएका यस्तै धेरै मिथ्याहरुलाई हटाउने प्रयास गरेका छन्। यहाँ त्यही विषयमा चर्चा गरिएको छ।…
जानिराख्नुस् सेक्सबाहेक यी काममा पनि कण्डम काम लाग्छ
लाेकपाटी न्यूज ८ मंसिर २०७५, शनिबार १४:३७ 0
काठमाडौं । कण्डमलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको रुपमा लिइन्छ । यौनजन्य रोगहरुबाट बचाउन यसले सहयोग गर्छ । मानिसहरुले कण्डमलाई यौनसम्पर्कको बेला प्रयोग गर्ने गर्छन् । कण्डम नेपालका स्वास्थ्य चौकीहरुमा बिना शुल्क पाइन्छ । तर, अधिकांश…
लाेकपाटी न्यूज १४ कार्तिक २०७५, बुधबार १८:२६ 0
एजेन्सी । विशेष गरी महिलाहरु कत्रो लिङ्ग मन पराउछन् ? भन्ने विषयलाई लिएर विश्वभर बहस बढेको छ । पछिल्लो समयमा यस्ता विषयमा विभिन्न अनुसन्धान र जनमत पनि सार्वजनिक गरिएका छन् । यस विषयमा अध्ययन गर्न पछिल्लो पटक वैज्ञानिकहरु थ्री डी…